लक्ष्मी बैंकको युरो कप योजना | Taja Update
गण्डकी प्रदेशसभाको अधिबेशन भोली, सबैं सांसदको पिसिआर परिक्षण हुने
लक डाउनको पूर्ण पालना गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाको आग्रह
एमसीसी संसदबाट निर्णय नहुदासम्म यथावत रहने छ : अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा
आजदेखि उपत्यकामा के के बन्द, के के खुल्ला ? हेर्नुस बिवरण
असार १, काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंकले एफ–वान सफ्ट सँग मिली ‘predict and win’ क्याम्पेन ल्याएको छ । क्याम्पेन युरो कप २०२१ सुरु भएको दिन जुन ११ देखी सुरु भई अन्तिम दिन जुलाई ११ सम्म जारी रहने बैकले जनाएको छ ।
यस क्याम्पेनमा ५ जना भाग्यशाली विजेताहरुले ५० एम.बि.पि.एस को १ वर्ष अवधिको ईन्टरनेट Subscription निःशुल्क पाउन सक्ने बैकले बताएको हो । क्याम्पेनमा भाग लिन लक्ष्मी बैंकका ग्राहकहरुले मोबाईल मनी सेवा सुचारु गरेको र मोबाईल मनीका प्रयोगकर्ताले भने सजिलै एपद्वारा नगद ट्रान्स्फर गरी यसमा सहभागी हुन सक्ने बैकले जनाएको छ ।
क्यम्पेनको अवधि पछी युरो कप विजेता देशको सही अनुमान गर्नुहुने ग्राहकहरु मध्येबाट लक्की ड्र मार्फत ५ जनालाई विजेता घोषणा गरिने र विजेता ग्राहकहरुले १ वर्षको ईन्टरनेट सब्स्क्रिप्सन निशुल्क पाउने बैकले बताएको हो ।
असार १, काठमाडौं । युरोकपमा नेपाल समयअनुसार ९ बजेर ४५ मिनेट जाँदा पोर्चुगल र हंगेरीबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । यो खेल हंगेरीको बुडापेस्टस्थित रंगशालामा हुनेछ । पोर्चुगल युरोकपको डिफेन्डिङ च्याम्पियन हो । त्यसैले आजको खेलमा उसको स्पष्ट लक्ष्य जित नै हुनेछ । फेरि, यो समूह सहज पनि छैन । यसपछि जर्मनी […]
नेप्से परिसूचक १८ दशमलव २४ अंकले गिरावट ,२० अर्ब भन्दा माथिको कारोवार